Ibsaa Jireenyaa - Page 5 of 78 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
Sababoota fi Furmaata Waliin Oduu Warra Duubatti Deebi’anii-Kutaa 13.2
May 20, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti sababa 14ffaa Islaama erga qabatanii booda akka duubatti deebi’an nama taasisan ilaalle jirra. Sababni kunis: Amanti keessatti daangaa darbuu fi wanta nafseen hin dandeenye itti fe’uudha.
Itti Haa Fufnuu?
May 19, 2021 Sammubani 3 comments
Tarii dubbistoonni websaayiti kana daawwattan interneeti waan qabdaniif beekumsa asirra argamu haala salphaan guduunfattu. Garuu namoonni baay’een interneeti waan hin qabneef beekumsi kuni isaan gahaa hin jiru. Kanaafu falli maali ree? Falli isaa bakka interneetin hin jirre kitaaba maxxansuun isaanitti geessudha. Tarii torbaanitti maallaqni interneeti irratti fixnu birr 24. Ji’atti immoo birr 96 ta’a. Tarii wanti interneetin arganne baduu danda’a. Kitaaba armaan gadi birr 65 yoo maxxansine jireenya guutuu nu waliin tura, dhaloota irraa dhalootatti darba. Nama baay’eetu irraa fayyadama.
Maalummaan Israa’el Qur’aanan Yommuu Ibsamu
May 17, 2021 Sammubani Leave a comment
Isra’el akka lakkoofsa Awrooppa bara 1948 erga hundeefamte jalqabee, balleessaa fi hacuuccaan raawwattu xiqqaa miti. Guyyaa guyyaan cunqursaa fi hacuuccaan isaanii dabalaa adeemee jira. Tarii namni gariin, “Sila Rabbiin olta’aan badii isaanii kana hin dhabsiisuu?” jechuun yaadu danda’a. Eeti, Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa waan hundaafu hammaa fi yeroo murtaa’aa kaa’e jira. Yeroon murtaa’e yoo dhufe wanti suni duubatis hin harkifatu, durattis hin darbu. Kuni seera Isaa hin jijjiramneedha. Qur’aana keessatti:
SABABA FI FURMAATA WALIIN ODUU WARRA DUUBATTI DEEBI’ANII-KUTAA 13.1
May 16, 2021 Sammubani Leave a comment
Assalamu aleykum wa rahmatullahi wabarakaatuh. Ji’a tokko oliif erga addaan banne booda kunoo walitti dachaane. Qormaata addunyaa tokko waliin osoo wal’aanso baanu addaan fagaanne. Amma qajeelotti mata-duree keenyatti seenna.
Dubbisuu Itti fuftuu?
March 7, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti sababoota erga Islaama qabatanii booda duubatti nama deebisan keessaa tokko godaansa dhiisu akka ta’e ilaalle jirra.
February 28, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti sababoota Islaama erga qabatanii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan ilaalle jirra. Ammas ittii aansun kutaa itti aanu ni ilaalla:
Itti Fufu barbaadduu?
February 24, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darban keessatti sababoota Islaama erga qabatanii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan ilaalle jirra. Har’as itti fufuun kutaa itti aanu ni ilaalla.